ကယ်တင်ခြင်း – Page3– Shwe Canaan
October 22, 2013 Shwe Canaan 0
သင်ခန်းစာ(၆)၌ မိန်းမ အမျိုး အနွယ်သည် သခင်ယေရှု ဖြစ်၍၊ြွေမအမျိုး အနွယ်သည် လူသား များ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပြီ။ ယခုဆက် လက်၍ စာတန် သားသမီး အကြောင်းကို လေ့လာကြစို့။ ဘုရားသား သမီးအဖြစ် ဘုရား သခင်က အာဒံနှင့်ဧဝ ကို […]
သင်ခန်းစာ(၅)၌ ဒုစရိုက်အပြစ် အကြောင်းကို သင်ခဲ့ရပြီ။ လူသည် ကောင်းသော အကျင့်ကို မကျင့်နိုင် ကြောင်း သိခဲ့ရပြီ။ ထိုသို့ဖြစ် ရခြင်းမှာ အမျိုး မကောင်း သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူသည် မိမိအမျိုးကို နှစ်သက်မြတ်နိုး တတ်သည်။ လူတိုင်းမိမိအမျိုးကို အမွှန်းတင်ချင်ကြ သည်။ အမျိုးကိုအထိ မခံနိုင်ကြချေ။ […]
သင်ခန်းစာ(၄)၌မွေးရာပါ အပြစ် အကြောင်း သိခဲ့ရပြီ။ ယခုမွေးရာပါ အပြစ်၏ အသီး အပွင့်ဖြစ် သောဒုစရိုက်အပြစ် အကြောင်းကို လေ့ လာကြရမှာဖြစ်သည်။ အသီးအပွင့် သခင်ယေရှုက အသီး အားဖြင့်အပင်၏ သဘောကို ထင်ရှားသည်ဖြစ်၍ အသီးကောင်းလျှင် အပင်ကောင်းသည်ဟု ဆိုကြလော့။ အသီးမ ကောင်းလျှင် အပင်မကောင်းဟု […]
October 21, 2013 Shwe Canaan 0
သို့/လူလောကတွင်ယခုအသက် ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့ချစ်သော မိတ်ဆွေ…ငရဲထဲမှကျွန်တော် သူဋ္ဌေးကြီးဒိုင်း(စ်)(DIVES)သည်သင့်အားငရဲထဲမှအကြောင်း တွေကို သတိပေးပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၂၀၀၀)ခန့်က လူ့လောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ သူဋ္ဌေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကဟာ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ မှာခရစ်တော် မပေါ်မှီ(၅)နှစ်က စည်းစိမ်ဥစ္စာ အလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ ဂျူး(ယုဒ) မိဘနှစ်ပါးမှဖွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ညီအကို(၆)ယောက်အနက် ကျွန်တော်ဟာ အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သလို အရင်ဦးဆုံးသေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖေဟာအလွန်ချမ်းသာပြီး ငွေကိုသာတပ်မက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေအထဲမှာဘဲအချိန်ကုန်တာများပါတယ်။ […]
သင်ခန်းစာ(၃)၌ ဘုရားနှင့်လူ အဆက်ပြတ်စေသော အရာသည် အပြစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရကြပြီ။ ထိုအပြစ် ကို ဖယ်ရှားနိုင် မှသာ ဘုရားသခင်ကို ဝိညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သမ္မာတရားအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကိုးကွယ်နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပြီ။ ထိုအပြစ်ကို ဖယ်ရှားဘို့ရန် အပြစ်ကြောင်းကို ပဋ္ဌမဦးစွာသိဘို့လိုပါသည်။ လူနာ၏ ရောဂါကုဘို့ရန် ရောဂါကို အရင်ရှာရသကဲ့သို့ လူ၏အပြစ်အကြောင်းကို […]
သင်ခန်းစာ(၂)၌ ထာဝရဘုရားသခင်သည် တလောကလုံး၏ တရားသူကြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီ။ ထိုတရားသူကြီးက သူ့ကို ကိုး ကွယ် သောသူသည် နံဝိညာဉ်ဖြင့် ကိုးကွယ်ရမည်ဟု ပညတ်ထားသည်။ နံဝိညာဉ်ဖြင့်ကိုးကွယ်ရမည် သခင်ယေရှုက ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည် ခမည်းတော်ကို နံဝိညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာ တရား (သမ္မာတရား) နှင့် လည်းကောင်း၊ ကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ ယခုပင်ရောက်လျှက်ရှိ၏။ […]
October 17, 2013 Shwe Canaan 0
တရားသူကြီး သင်ခန်းစာတစ်၌ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်နိုင်ရန် ဘုရားသခင်၏ အမြင်အတိုင်း မြင်ဘို့လိုသည်ဟု သင်ခဲ့ကြပြီ။ ဘုရားသခင်၏ အမြင်သာလျှင်မှန်၍ လူ၏အမြင်သည် မှားသည်ဟု သင်ခဲ့ရပြီ။ အဘယ်ကြောင့် လူ့အမြင်သည်မှား၍ ဘုရားသခင်၏အမြင်မှန် သည်ဟု ဆိုနိုင်သနည်း။ အပြစ်သားများကို တရားစီရင်သူ၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးသူသည် တရားသူကြီး ဖြစ်သည်။ […]
ကယ်တင်ခြင်း သင်ခန်းစာ (၁)
မိတ်ဆွေအပါအဝင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားတိုင်း ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ဘို့ ရန်ဘုရားသခင် အလိုရှိ သည်။ ၁တိ ၂း၎ ၌၊ လူအပေါင်း တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍၊ သမ္မာတရားကို သိစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိ၏။ ဟု ဆိုထားပါသည်။ မိတ်ဆွေလည်း လူအပေါင်းထံ၌ ပါဝင်သောကြောင့် […]
ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူနည်း WHO IS GOD?
January 26, 2013 Shwe Canaan 1
ခရစ်တော်၌လူသစ် အခန်း (၂)“ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မမြင်စဖူး …” ဟု ဖော်ပြထားသည် ဖြစ်ရာ ဘုရားသခင်အကြောင်း သိလို၍ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူနည်းဟု မေးမြန်းလာသူအား လူÓဏ်ကို အားကိုး၍ အဖြေပေးရန် အလွန်ခက်ခဲလှပါသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း တိတိကျကျ ဖော်ပြအဖြေ ပေးထားသည်ကို […]
ဘုရားသခင်နှင့် ဖန်ဆင်းခြင်း GOD AND CREATION
January 16, 2013 Shwe Canaan 0
New Life in Christ အခန်း (၁) ဘုရားသခင်နှင့် ဖန်ဆင်းခြင်း GOD AND CREATION မရပ်မနား လည်ပတ်နေသည့် နာရီတစ်လုံးကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သည့်အခါ အချိန်မှန်မှန် သွားနေ၏။ ထိုနာရီသည် မိမိအလိုအလျောက် ဖြစ်လာပြီးလည်ပတ်သွားနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ထုတ်လုပ်သူရှိ၍သာ ဖြစ်လာပြီး လည်ပတ်သွားလာနေကြောင်း သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။ […]
အမှန်တကယ်ပင်ရှိပါသည်အပြစ်ဒဏ်ခံရာ ငရဲမီးအိုင်ရှိကြောင်း လူတိုင်း၏စိတ်ဝိညာဉ်၌ ယုံကြည်မှုရှိကြသည်။ ငရဲရှိသည်ဟု နှုတ်ဖြင့်လူရှေ့တွင် ဝန်မခံလိုသူများပင် အတွင်းဩတ္တပ၌ ငရဲရှိကြောင်းကို သေသေချာချာ သိကြပါသည်။ သို့သော် လူအများမှာ အပြစ်ဒဏ်ခံရာ ငရဲ အကြောင်းကို မစဉ်းစားလိုကြပေ။ အကြောင်းမှာ မိမိတွေ့ကြုံခံစားရမည့် ဘေးဒဏ် ကို တင်ကြိုမစဉ်းစာ ဝန့်သောကြောင့်တကြောင်း၊ အ ချို့မှာ […]
September 4, 2012 Shwe Canaan 0
(၁တိ၊၂း၎) ကျမ်းပိုဒ်အရ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကလူအပေါင်း ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီး သမ္မာရားသိဖို့ဖြစ်တယ်…. လူတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းရောက်နိုင်မလား“(မဿဲ၊၇း၂၁-၂၃)ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆုံးမသြ၀ါဒပေးသူ၊နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်သူ၊တန်ခိုးများစွာပြသူ တွေကိုတောင် ခရစ်တော်က ငါ့ထံမှဖယ်ကြလို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီလူတွေဟာဘုရားအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ၊ အမူတော်ဆောင်တွေ၊ကောင်းတာ လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့အဲဒီလို ဖြစ်ရသလဲဆိုရင် ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာသိပြီး ခရစ်တော်နဲ့ သိကျွမ်းမူမရှိ လို့ပါပဲ(They know about Christ, but they […]